Mashandisiro ekushinga uye italics muWhatsApp ye iPhone | IPhone nhau
Mashandisiro ekushinga uye italics muWhatsApp ye iPhone
Isu takatokuudza nezuro kuti husiku uye hunyengeri WhatsApp yekuvandudza inonhuwirira pakati peyakajairika uye yakaipa. Kazhinji tinofanirwa kudzoka mazuva mashoma gare gare kuzokuudza nhau chaidzo dzekuti WhatsApp Inc timu yekusimudzira inosimbirira kutivanzira isu, asi isu hatipotse kana imwe chete sekuziva kwako, uye zvakanyanya "kugadzirisa bug" , patinonyanya kutsvaga. Panguva yemasikati nezuro shamwari yakandishamisa neruzivo rwekuda kuziva muWhatsApp yeIOS, ikozvino taigona kuisa zvinyorwa mukati akashinga, kuyambuka and in ityai. Isu tinotsanangura kuti iwe ungaita sei kuti aya mavara agadzirise iwewo pane yako iPhone nenzira yakapusa nzira.
Chokwadi ndechekuti yakapusa kupfuura zvatinogona kufungidzira, zvisinei, iri imwe nzira yakashata yekugadzirisa izvi muchinyorwa, asi chinhu chakakosha ndechekuti chinoshanda, uye nekuda kweizvi tinogona kusimbisa zvishoma pane zvakanyorwa, izvo zvinozotiponesa kazhinji zvinokanganisa mazita nemitsara kana kusimbisa mamwe mapoinzi. Kunyangwe zviri pachokwadi, basa re "kuyambuka" ini handioni rakakosha kupfuura kutsika shamwari dzedu zvishoma.
Nekudaro, sekuona kwawakaita mumufananidzo, kuyambuka rugwaro tinofanirwa kuisa mucherechedzo "~" pamberi uye shure kwenyaya, kuti tinyore zvine mutsindo tinofanirwa kuisa chiratidzo "*" pamberi uye mushure memavara atinoda kujekesa zvakashinga uye neKupedzisira kunyorera italics isu tinoshandisa "_".
Zvakanaka, basa risingafadzi kwavanenge varipo, panguva iyi isu takamirira WhatsApp kuti iise injini yekutsvagisa mufananidzo mune chat, zviwedzero zvakaita seTeregiramu uye kugona kutsvaga maGIF nekungonyora "@gif" kana zvimisikidzo zvetsika. Asi WhatsApp inoita senge haizofi yakasvikako, kutaura zvazviri, kunyangwe isu tave kugona kupasa maPDF, ivo havasati vazvishingisa neiyo .doc.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone nhau » Mashandisiro ekushinga uye italics muWhatsApp ye iPhone
Ndinotya pese pandinoisa "Bug Yakagadziriswa" mune yekuvandudza. Iyo mania yekunyepa.
Ndine imwezve nyaya inonakidza kwazvo yandichaburitsa manheru ano kana mangwana ^^
Amauri leija akadaro
Ini ndinoona izvi zvinogadziriswa pane yangu iphone 6S, asi iye anogamuchira anozviona sezvazviri, nezviratidzo zvisati zvaitika uye zvichitevera (vane iphone 5S)
nekuti chii ichi?
Pindura Amauri Leija
Unofanirwa kugadzirisa whatsapp kuti ibude, kana usingaione uchaona sezviri ...
Uye icho chinyorwa chingaonekwawo chakashinga / italic kune vashandisi vea android kana kuti zviri kufamba sei?
Foxconn inosimbisa kutengwa kweSharp ye $ 3.500 bhiriyoni
Apple Inowedzera Mamwe Maguta kuFlyover; yakafararira "Vhara" kune dzimwe nyika